Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Faraca Muftaaxul-xoriyo oo Maanta Ifo Ku Qabsoomay.
Shirkii Faraca Muftaaxul-xoriyo oo Maanta Ifo Ku Qabsoomay.
Posted by Dulmane	/ May 26, 2017
Maanta oo jumce ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 26/5/17 waxaa kulankoodii caadiga ahaa isugu yimid xubnaha faraca Muftaaxul-xoriyo ee ka howl gala xerada Ifo ee deegaanka Dhadhaab.
Kulanka oo ahaa mid siwayn looga soo shaqeeyay ayaa furmay abaare 2:0m duhur nimo xiliga Dhadhaab, waxaana kasoo qayb galay inta badan xubnaha faraca Muftaaxul-xoriyo oo ay hurmuud kayihiin maamulka iyo howl wadeenada faraca.
Wacdi iyo warbixin dheer kadib waxaa laguda galay qodobadii shirka ee loogu tala galay in ay xubnuhu afkaartooda saliimka ah kadhiibtaan, sikastaba ha ahaatee dood dheer iyo falanqayn kadib waxaa kulanka kasoo baxay go’aamo wax ku’ool ah wax tar wayna u leh guud ahaanba howlaha halganka, waxaana hoosta laga xariiqay in kor looqaado howlaha halganka xaqa ah ee Ogadenia kasocda qofkastana naftiisa laxisaabtamo.
Ugu dambayntii kulanka ayaa lagu soo gabagabeeyay talo bixino ay is dhaafsanayeen maamulka iyo xubnaha faracu, waxaana ugu dambayn lakala dalbaday cafis maadaama oo ay soo dhawdaha bishii barakaysnayd ee Ramadaan.
Kulanka ayaa kusoo dhamaaday jawi dagan iyo farxad balaadhan wuxuuna soo dhamaaday abaare 4:00 galabnimo.